NFC ngwaahịa emeputa
Akwado NFC ịkwụ ụgwọ, ibe na labelụ emeputa ozugbo-erite uru
N'afọ adịbeghị anya, China UnionPay na telecom rụọ na NFC mobile ugwo banyere na-aga n'ihu mgbalị, duru NFC NR nke a mma ahịa atụmanya na industry.Several ezigbo ihe maka ịkwa NFC ugwo, ụlọ ọrụ analysis, NFC mgbawa na ndị ụlọ ọrụ yinye na labelụ emepụta na-erite uru kasị ozugbo.
“First NFC mobile ugwo ụdị iji kwalite ewu ewu na nke NFC mobile phones, mgbe NFC mobile phones-ewu ewu, a ga-enwe ụdị nile nke NFC mode na NFC ngwa ohere, ụgbọala NFC ibe.” Domestic maara nke ọma NFC mkpado mgbawa na enye ofufe ọnụ microelectronics, osote onye general manager Mr Liu Jianxin kwuru. Liu ekwere na ina ibe na NFC tags ga-budata ụba. Ya mere, o na-ekwere na mba push-atụ ndị NFC ịkwụ ụgwọ maka anụ ụlọ NFC mgbawa emepụta ga-nnọọ mma.
“First NFC mobile ugwo ndọtị ga-akwalite popularization nke NFC mobile ekwentị, mgbe NFC mobile ewu ewu mgbe, a ga-enwe dị iche iche na etu NFC ngwa ohere, duru NFC ibe eji. “Maara nke ọma NFC mgbawa na-eweta Shanghai FeiJu microelectronics Manager Liu Jianxin kwuru.
Liu chere NFC labelụ maka a ịrịba ama mmụba na ina ibe. Ya mere, o na-ekwere na-ike na mba a NFC ugwo maka NFC mgbawa onye ga-nnọọ mma.
Dị ka a na-eduga RFID tags emeputa ke China, Seabreeze Smart Card Co., Ltd., na ya na-eduga mmepụta technology uru, nwere ike inye NFC ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka akwụkwọ mmado, kaadị, mkpụrụ ego tags, epoxy tags, Eriri Ngakọ Igodo, wristbands / ọla, wdg, especially the newly added automation Sticker and Epoxy tags production lines can meet the needs of large and small customers at home and abroad. (SeabreezeRFID)
Na Mbụ: Shenzhen Seabreeze Smart Card Co., LTD. ọhụrụ website na-ewu, otú nọrọ na-ekiri.
Osote: ECB Onya ARO, Kwuru Ripple ntabi Ịkwụ Ụgwọ Service
» ECB Onya ARO, Kwuru Ripple ntabi Ịkwụ Ụgwọ Service
» Akwado NFC ịkwụ ụgwọ, ibe na labelụ emeputa ozugbo-erite uru
» Shenzhen Seabreeze Smart Card Co., LTD. ọhụrụ website na-ewu, otú nọrọ na-ekiri.
RFID frequencies na Nzipu Power
ECB Onya ARO, Kwuru Ripple ntabi Ịkwụ Ụgwọ Service
10-bit Number Ma 8-bit Number Nchigharị Mmekọrịta nke Access Control Card
Shenzhen Seabreeze Smart Card Co., LTD. ọhụrụ website na-ewu, otú nọrọ na-ekiri.